नक्सा जारी गर्दैमा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्न मिल्दैन, ओलीले नेपाल भारत सम्बन्ध खत्तम पारिदिनुभयो–डा.सुन्दरमणि दीक्षित – Namaste Dainik
नक्सा जारी गर्दैमा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्न मिल्दैन, ओलीले नेपाल भारत सम्बन्ध खत्तम पारिदिनुभयो–डा.सुन्दरमणि दीक्षित
May 22, 2020 NamastedainikLeaveaComment on नक्सा जारी गर्दैमा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्न मिल्दैन, ओलीले नेपाल भारत सम्बन्ध खत्तम पारिदिनुभयो–डा.सुन्दरमणि दीक्षित
काठमाडौं। नागरिक समाजका अगुवा डा.सुन्दरमणि दिक्षित खरो बोल्छन्। बेला बेलामा विवादमा आइरहने उनले यसपटक लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर कसरी प्रमाण गर्ने ? प्रश्न गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलीले धेरै समस्या ल्याएको उनको तर्क थियो ।
मैले नयाँ कुरा ल्याएको होइन । कोरोनाले आफ्नो गुण बनाउने मुख्य प्वाइन्ट भनेको नाकको प्वाल हो । त्यो चाहिं काठमाडौंको नागढुंगा । त्यहाँबाट छिरेर आयो भने थानकोटसम्म पुग्दा त्यसलाई हाम्रो त्यसलाई घाँटी भन्ठान्नुहोस् । यो चार,पाँच दिनसम्म कोरोना भाइरस नाकको प्वालमै बस्छ । त्यसलाई जलनित्य गरेपछि त्यो भाइरसलाई मत्थर पारिदिन्छ । यो पुरानो पद्धति हो । त्यसैले बेलुका घरमा गएपछि तातोपानी तताउनुस्,त्यसमा नुन,बेसार हाल्नुस् सकेसम्म खानुस् । नियमित त्यसो गरियो भने दिनभरि टाँसिएर आएको भाइरस नुन,बेसार मसला हालेको तातो पानीले निस्तेज हुन्छ । अनि माक्स,स्यानिटाइजर पनि लगाउनुहोस् । साबुन पानीले हात पनि धुनुहोस् । हरेक दिन बेलुका सुत्ने बेलामा नाकको प्वाल जलनित्य गर्नुहोस् । यो कसैले न कसैले गरेकै छ । यो पुरानो चलन पनि हो । नुन,बेसार हालेको तातोपानी पनि नियमित खानुहोस् ।
कुनै पनि प्रविधि,पद्धति सञ्जीवनी बुटी त हुनै सक्दैन नि । जसरी साबुन पानीले हात धुनु भनिएको छ । त्यसमा पनि कुनै प्रुफ त छैन । तर,यसले हुन सक्छ भनेर संसारभरि गरे हामीले गरेका छौं । माक्स लगाउनुपनि सञ्जीबनी बुटी त होइन । त्यो माक्स पनि गुणस्तरीय ल्याउन सकेका छैनन् । त्यो पनि बुटी होइन । भीडभाडमा नजानु भनिएको छ । त्यसैले यी सबै कुरा अनुमान,अनुमान मात्रै छ । यी सबै विधिमध्ये जलनित्य हाम्रो मौलिक विधि हो । यसलाई कसैले पनि वास्ता गरेनन् । माक्स लगाउनुहोस् इन्ट्रि प्वाइन्ट नाक नै हो । हात धुनुहोस् इन्ट्रि प्वाइन्ट त नाकै हो ।
होइन,फाइदा हुन्छ भनेर क्याम्पियन त गरेको छैन नि । सरकार त पटक्कै सफल भएको छैन नि । काठमाडौंमा पनि कति ठाउँमा त आइसक्यो नि कोरोना नियन्त्रणमा त सरकार बिलकुलै असफल भएको छ नि । यो अनौठो भाइरस छ । यसलाई रोकथाम गर्न निकै गाह्रो छ । तर,म्यन कुरा भनेको काठमाडौंको नाका हो । त्यहाँ सरकारले एकदमै व्यववास्ता ग¥यो । जथाभावी लापरबाही ग¥यो त्यसले गर्दा काठमाडौंमा यो भाइरस भित्रिएको हो । अहिले काठमाडौंमा जति पनि देखिएका छन्। ती काठमाडौंमा उम्रिएका होइनन् बाहिरबाट आएका हुन् । जसरी यहाँ खतरा देखिएको छ । त्यो सरकारले सतर्कता नअपनाएका कारण नै हो । सतर्कताको जनताले धेरै दुःख गरेर पनि सामाना गरे । तर,सरकारले अपनाउनुपर्ने कुरा गर्न सकेन । त्यसमा मलाई दुःख लागेको छ।
म्यासेन्जरमा च्याट गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी हुँदैछ निगरानी
अमेरिकामा कोरोनाबाट थप एक नेपालीको मृत्यु, उनकी श्रीमतीलाई समेत कोरोना सन्क्रमित।
युरिया मलको संकट टार्न प्रधानमन्त्री नै अघि सरे, बंगलादेशसँग पैँचो मागे